﻿	လွယ်ကူသော Salmon Patties - ချက်ပြုတ်နည်းများ
စတိုးဆိုင်ဝယ်ငံပြာရည်နှင့်အတူ teriyaki ကြက်သား
လွယ်ကူသော Salmon Patties
ဆော်လမွန် Patties ဒီနွေရာသီမှာသင့်ရဲ့ပင်လယ်စာပြင်ဆင်မှုအတွက်ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မွှေးကြိုင်သောဆော်လမွန်ကိုကြက်သွန်နီများ၊ လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊
သငျသညျအံ့သြဖွယ်မှတ်မိလိမ့်မည် ဟင်းသီးဟင်းရွက် Crusted မုန့်ဖုတ်မုန့်ညက် ငါတို့မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သော Alaskan Cruise သည်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ မင်းသမီးခရုဇ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပျော်စီးသင်္ဘောကိုလက်ခံခဲ့သည်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပင်လယ်စာများစွာကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးဒီအရသာရှိတဲ့ဆော်လမွန်ပီတီစာရွက်ကိုကမကထပြုခဲ့သည်။ ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မ (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများ) စာသားကျနော်တို့ကရုဇ်ကိုချစ်ဘယ်လောက်ပျော်စရာအကြောင်းပြောနေတာကိုရပ်တန့်နိုင်ပါ!
တစ်ခုအပေါ် Alaska သွားရောက်ခြင်း Alaskan ခရုဇ် Cruises နှင့်အတူရိုးသားစွာငါပြုခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်! အလက်စကာသည်ပုံးတစ်ပုံးစာရင်းဖြစ်ပြီးလူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် သူတို့ရဲ့ဘဝ၌! ကျနော်တို့ (မေလ) အံ့သြဖွယ်ရာသီဥတုနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ဤမျှလောက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လေ့လာရေးခရီးခံစား! လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိသည် - ရွေးချယ်ရန်လေ့လာရေးခရီးများစွာရှိသည်။
ရေခဲမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်လိုသည် Mendenhall ရေခဲမြစ် သငျသညျအစဉျအမွဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်အရှိဆုံးထူးခြားသောမြင်ကွင်းများတစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်သော) သော!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး၏စုံတွဲတစ်တွဲတွင်ပါဝင်သည် Glacier ပွိုင့်တော Safari နှင့် ဝေလငါးစောင့်ကြည့် & ပင်လယ်စာပွဲ , ထိုပွဲသည်အလွန်ကြီးကျယ်လှ၏။
လွယ်ကူသော deviled ကြက်ဥအာလူးသုပ်စာရွက်
ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်ရှိခဲ့ပါတယ် ဂဏန်းနှင့်ပုစွန်ဆူပွက် အလက်စကာဘုရင်ကဏန်းနှင့်ပုစွန်များအမှိုက်ပုံများ၊ အမှိုက်ပုံများဖြင့်ကြည့်ပါ ဒီမှာ Instagram ကို )!
ငါတွေ့ခဲ့သည့်ဝေလငါးအရေအတွက် (ဝေလငါးကြည့်သည့်ခရီးစဉ်အပေါ်သာမကဘဲဆော်လမွန်ငါးဖမ်းခရီးစဉ်ကိုပါ) ရေတွက်။ မရပါ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်တစ်သက်တာ၏အတွေ့အကြုံပဲ! ငါတို့ကိုလှပသောသမုဒ္ဒရာရေ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်တောင်တန်းများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝမဂ္ဂဇင်းမှတကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်ဟုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ငါတို့ခရီးစဉ်တိုင်းကိုရိုးရိုးသားသားချစ်မြတ်နိုးတယ်၊ မြင်ကွင်းတွေကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ လေ့လာရေးခရီးတွေကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတယ်၊ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ကုမ္ပဏီကအရမ်းပျော်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲပင်လယ်စာကိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူး Alaskan ခရုဇ် ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြဖို့ yummy ပင်လယ်စာချက်ပြုတ်နည်းတွေဖန်တီးဖို့ကျွန်တော့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာဤဆော်လမွန် Patties ရကုန်အံ့!
ဆော်လမွန် Patties လုပ်နည်း
ဤ ၀ မ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းသာဖြစ်မှုကိုကြာမြင့်စွာမယူပါ။ ငါစမုန်လတ်ဆော်လမွန်ငါးကိုသုံးပါဒါပေမယ့်သင်သုံးနိုင်သည် ကျန်ရှိသောဆော်လမွန် ။
ခက်ရင်းခွကို သုံး၍ ဆော်လမွန်ကိုအလွှာပါးလိုက်ပါ။ (သင့်ဆော်လမွန်ငါးလွှာစားချိန်တွင်လွဲချော်သွားနိုင်သည့်အရိုးများကိုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ။ )
ညင်ညင်သာသာသင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပေါင်းစပ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မျှအေးပါ။ ပီတီကို ပြန်၍ အေးပါ။
ဇီယာစေ့ pickle ကျောက်ချဉ်သီးဆော့စ်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးထဲမှာလိုပဲ ဏန်းကိတ်မုန့် စာရွက် အအေးခံအဆင့်များသည်ဤဆော်လမွန်ကိတ်မုန့်များကိုအတူတကွကိုင်တွယ်နိုင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ယခုအချိန်ကာလသည်သင်၏ကျောက်ချဉ်ဆော့စ်ကိုအတူတကွစုစည်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
ဆော်လမွန်ပီတီများသည်လွယ်ကူသောညစာစားပွဲတစ်ခုဖြစ်သည် (သို့မဟုတ်နေ့လည်စာစားရန်လည်းလွယ်သည်။ ) ငါအပြင်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့သူတို့ကိုအစေခံရတာကြိုက်တယ် လတ်ဆတ်သော zucchini သုပ် သို့မဟုတ်အတူချစ်စရာကောင်းတဲ့သုပ် သံပုရာ vinaigrette နှင့်ဝိုင်ဖြူတစ်ခွက်။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁၀ မိနစ်များ အနားယူချိန်၃၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်ငါးဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ မြဝတီမြို့နယ် စာရေးသူHolly Nilsson ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးရာသီများနှင့်ပေါင်းစပ်နူးညံ့သောမွှေးသောဆော်လမွန်သည်လွယ်ကူသောအစားအစာအတွက်အကောင်းဆုံးသောဆော်လမွန်ပီတီများကိုဖန်တီးပေးသည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢½ ခွက် ကြက်သွန်နီ ထုထည်
▢နှစ် ဘူးခွံများ ဆယ်လ်မွန်6အောင်စတစ် ဦး ချင်းစီ, ဒါမှမဟုတ် 2-3 ခွက်ကျန်ရှိသော flaked ဆော်လမွန်
▢၁ ခွက် မင်္ဂလာပါ ခွာ
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပင်လယ်အော်ရာသီဟောင်း
▢၁ သံပယိုသီး အရည်နှင့် zested
▢နှစ် ဇွန်း လတ်ဆတ်တဲ့ဇီယာစေ့ ကုန်တယ်
▢နှစ် ဇွန်း parsley ကုန်တယ်
မြေသားအမဲသားမုန့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ taco သို့ကျဆင်းလာ
ထောပတ်ကိုဒယ်အိုးထဲအရည်ပျော်ပြီးနူးညံ့သည့်အထိ ၃-၄ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။ အေးမြ။
ပန်းကန်လုံးတွင်ညှိုးနွမ်းနေသောဆော်လမွန်၊ ½ခွက်ဖလားပေါင်မုန့်များ၊ ပင်လယ်အော်ရာသီဟောင်း၊ ဥ၊ သံပုရာ၊ ဇီယာစေ့နှင့် parsley တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ချက်ပြုတ်ထားသောကြက်သွန်နီများကိုထည့်ပြီးရောမွှေပါ။
အရောအနှောကို ၁၅ မိနစ်ထားပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီး Patty သို့ဆော်လမွန်အရောအနှောကိုဖွဲ့စည်း။
ကျန်ရှိသော½ခွက်ဖလားပေါင်မုန့်များကိုရေတိမ်ပိုင်းတွင်ထည့်ပါ။ ဆော်လမွန်ငါးပိများကိုပေါင်မုန့်အိတ်ထဲသို့နှစ်မြှုပ်ပြီးလိုက်နာရန်ညင်ညင်သာသာဖိပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အနည်းဆုံးမိနစ် ၂၀ ခန့် (သို့) ၁ နာရီအထိထားပါ (၎င်းသည်သူတို့၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်) ။
ဆန္ဒရှိလျှင် tartar ငံပြာရည်နှင့်အပိုဆောင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
သော့ချက်စာလုံးဆော်လမွန် Patty သင်တန်းနေ့လည်စာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
သငျသညျကိုခစျြပါလိမ့်မယ်ပို Salmon ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် Crusted မုန့်ဖုတ်မုန့်ညက်
ကညွတ် Salmon သတ္တုပါး packets တွေကို
တစ်ခုမှာ Pan နှမ်းဂျင်းမုန်နှင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း